BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Somaliland iyo Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 June, 2012, 10:18 GMT 13:18 SGA
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland, Ahna Afhayeenka dowladda, Cabdi Yusuf Ducaale waxa uu ka warramayaa wada hadalka ay la galayaan Soomaaliya iyo xaaladda saxaafadda.
Cabdi Yusuf Ducaale, Wasiirka warfaafinta Somaliland
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland, Ahna Afhayeenka dowladda, Cabdi Yusuf Ducaale ayaa BBC uga warramay wada hadalka ay la galayaan Soomaaliya, oo meel geba geba ah mareyso qaban qaabadiisa.
Wadahdalkani wuxuu daba joogaa shirkii London bishii Feberuary looga hadlay Somaliya oo madaxdii caalamka ee ka soo qeyb gashay ay ku dhiirri gelisay Somalia iyo Somaliland in ay wada hadlaan.
Wadahadalka hadda dhex mari doona Somaliya iyo Somliland waxaa lagu wadaa in uu ka dhaco dalkan Britain bishan June gudaheeda.
Dhinaca kale, Wasiirka oo u warramay weriyaha BBC Farxaan Maxamed Jimcaale, ayaa waxa kale oo uu ka warramayaa eedeeyn loo soo jeediyay dowladda Somaliland oo la sheegay in si adag ula dhaqanto suxufiyiinta ka hawlgala Somaliland.